राष्ट्रिय सभालाई प्रबुद्ध र विज्ञको सभा बनाऔं :: Setopati
पहिला प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष चुनिएर आउने भएकाले राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने कुरा हुन्थ्यो। अहिले प्रतिनिधि सभा नै समावेशी छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभा प्रबुद्ध, विज्ञहरुको सभा बनाउनुपर्छ कि !
सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन मध्ये मेरो पनि मनोनयन भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन पाएकोमा गौरवान्वित छु। राष्ट्रप्रमुखबाट मनोनीत भएकाले बोली, व्यवहार, आचरण, कार्यशैली सबै कुराहरु मर्यादित, सम्मानित, ग्राह्य र स्वीकार्य हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिएँ। त्यही गरिमा कायम राख्ने गरी दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छु। प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको सभा भनेर चिनिने राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन पाएकोमा गौरवको महसुस भएको छ।
२०३८ सालमा छोटो अवधिका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतको सचिवालय (हालको संघीय संसद् सचिलाय) मा दुई वर्ष शाखा अधिकृतका रुपमा काम गरेको थिएँ।
त्यसपछिका राष्ट्रिय पञ्चायतका बजेट छलफलमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट सहभागी भएको थिए। २०४६ सालपछिको संसद्मा बाहिरबाट हेर्दा केही नमज्जा पनि लाग्यो। अपशब्द, हुलहुज्जत हुने खालको पनि थियो। तर २०६३ पछिको संविधान सभा र प्रतिनिधि सभा धेरै व्यवस्थित र मर्यादित भएको महसुस गरेको छु। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु बढी जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयकहरुलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न सहयोग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा धेरै हिसाबले संयमित र व्यवस्थित छ। क्षणिक अवरोध बाहेक राष्ट्रिय सभा सधैं सौहार्दपूर्ण रुपमा सुचारु रह्यो।
जनप्रतिनिधिहरुले संसद्मा आफ्ना मतदाताहरुको आवाज प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। ती आवाजलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो। दुई वर्ष मैले मन्त्रीको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहन पाएँ। त्यो जिम्मेवारी पहिलो दिनबाटै पूरा गर्न पाएकोमा खुसी महसुस भएको छ।
लामो समयदेखि सहकार्य गरेका मित्रहरु सांसद हुनुहुन्छ। कोही सत्तापक्षमा, कोही विपक्षमा हुनुहुन्छ। कोही सँगै, कोही बेग्लै दलमा हुनुहुन्छ। नयाँनयाँ कोटमा नयाँनयाँ भाउभङ्गीमा देख्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ। मनमनै लाग्छ कि, हिजो त यसो भन्थ्यौ, आज त अर्कै भन्दैछौ। अर्को रोचक चाहिँ के लाग्छ भने म यो तथ्य होइन भन्छु साथीहरुले त्यही दोहोर्‍याउनु हुन्छ।
उदाहरणका लागि कृषिको बजेट ३ प्रतिशत होइन भन्छु, साथीहरु त्यही भनिरहनुहुन्छ। मैले भनेको छु, ‘कृषिको बजेट हो त्यो । सिँचाइको, ऊर्जाको, कृषिको आधुनिकीकरणको अर्को ठाउँमा छ।’
दुई वर्षको कार्यकाल आफैँमा छोटो होइन। यही बीचमा राज्य संरचनामा परिवर्तन भएको छ, वित्तीय संरचना चलेको छ, दर्जनौं कानून बनेका छन्। त्यसैले मलाई छोटो समयमा नै कार्यकाल बित्यो भन्ने लागेको छैन। मन्त्रीको रुपमा दुई वर्ष मैले अधिकतम काम गरेको जस्तो लाग्छ।
अन्त्यमा एउटा राष्ट्रिय बहसको रुपमा रहेको विषय राख्न चाहन्छु। पहिला प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष चुनिएर आउने भएकाले राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने कुरा हुन्थ्यो। अहिले प्रतिनिधि सभा नै समावेशी छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभा प्रबुद्ध, विज्ञहरुको सभा बनाउनुपर्छ कि! प्रतिनिधि सभाका कमीकमजोरी भएमा त्यसलाई सच्याउन सक्ने राष्ट्रिय सभा हुनुपर्छ कि भन्ने लागेको छ।
(संघीय संसद सचिवालय, सिहंदरबारद्वारा प्रकाशित 'राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष' किताबमा समाविष्ट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको लेख।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार १३, २०७७, ००:३७:००